युरोप मा यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > युरोप मा यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु
युरोप लाखौं आकर्षित कि यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु प्रशस्त पर्यटक. त्यहाँ एक ठाँउहरु को किसिम हेर्न को लागी - वास्तु र सांस्कृतिक स्मारक देखि पुरानो महाद्वीप को प्राकृतिक चमत्कार.
छनौट गर्न धेरै स्थानहरू, एक यात्री सन्दर्भमा निर्णय गर्न गाह्रो हुन सक्छ गन्तव्य. तपाईं जो युरोप मा यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु पहिलो हेर्न चयन गर्न गर्न, हामीले एउटा सर्टलिस्ट कम्पाइल गरेका छौं:
फ्रान्स यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु
फ्रान्स सबैभन्दा उल्लेखनीय यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु केही भर्साइल्लेज जस्तै विचित्रताहरू समावेश. यो मा सबैभन्दा प्रसिद्ध र चमकदार शाही निवास हो फ्रान्स. उल्लेख गर्न अर्को सुन्दर ठाउँ सेन्ट-Savin-सुर-Gartempe को Abbey चर्च छ. यो पोइटोउ मा 9th शताब्दीमा एक Romanesque चर्च छ, नयाँ एक्विटेन.
धार्मिक वस्तुहरु हेर्न प्रेम गर्ने यात्री लागि, को Chartres गिरजाघर पनि छ. यो रोमन क्याथोलिक कैथेड्रल १३ औं शताब्दीको मिति, र तपाईंले यसलाई दक्षिण पश्चिम को पाउन सक्नुहुन्छ पेरिस. अन्तमा, त्यहाँ छ मोन्ट सेन्ट-माइकल र यसको बे. यसलाई रणनीतिक fortifications देखि डेटिङ एउटा टापु छ 8 ई, एक मठ रूपमा यसको मुख्य संरचना.
पेरिसदेखि लियोन हाईस्पिड ट्रेन
यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरूमा इटाली
इटाली यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु भरिएको छ, त्यसैले हामी सबै भन्दा चिरपरिचित व्यक्तिहरूलाई केही उल्लेख छौँ. हाम्रो पहिलो स्टप हो पम्पी को पुरातात्विक क्षेत्रहरु, हरकुलेनियम, र Torre Annunziata. आफ्नो महत्त्व तथ्यलाई मा निहित तिनीहरूले पर्वत को फुट्ने काम मा गाडे थिए कि सहर पुरातन रहलपहल छन् कि. मा VESUVIUS 79 ई. Castel डेल मोंटे पनि छ, को 13 औं शताब्दीमा एक महल डेटिंग. यो Europ को प्रभाव घोला जान सक्छ देखिEAN Cistercian गोथिक र मुसलमान वास्तुकला, यो एक आकर्षक दृष्टि छ.
यसबाहेक, पनि इटाली ओस्लो मा Piazza डेल Duomo घर छ, प्रसिद्ध झुकाव टावर. अन्तमा, त्यहाँ रहेका ऐतिहासिक दुई प्रमुख शहर को केन्द्र, फ्लोरेन्स र रोम. फ्लोरेन्स, यस पुनर्जागरण वास्तुकला शैली प्रतिनिधित्व संरचना हो एक-हेर्न पर्छ. को Uffizi नछुटाउनुहोस्, सान्ता Croce को basilica, र फ्लोरेन्स गिरजाघर. रोम मा, तपाईं स्मारक र सांस्कृतिक साइटहरु को एक विशाल नम्बर रोमी साम्राज्यको केन्द्र र क्याथोलिक विश्व अन्वेषण गर्न.
बारी फ्लोरेन्स गाडिहरु गर्न
Salerno फ्लोरेन्स गाडिहरु गर्न
जर्मनी महल को एक देश छ, cathedrals, र अन्य अचम्मको यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु. आचीन क्याथेड्रल चार्लेमेग्नेको पुरानो ठाउँ हो र पुरातनता पछि पहिलो-निर्मित भोल्ट संरचना. को सब भन्दा लोकप्रिय स्थलचिन्ह जर्मनीमा अर्को क्याथेड्रल हो, यो कोलोन मा एक. यसलाई देखि सुरु निर्माण गर्न शताब्दीयौंदेखि लिए 1248. यसबाहेक, रोमन साम्राज्यको फ्रन्टिर्सहरू पनि भ्रमणको लागि योग्य छन्. सबैलाई Hadrian पर्खाल र Antonine पर्खाल हेर्नुपर्छ, जसमा निर्माण थिए 122 ई र 142 ई, क्रमशः.
अन्वेषण माथिल्लो मध्य राइन उपत्यका एक अविस्मरणीय हुन जाँदै छ अनुभव. यस क्षेत्रमा एक विशाल संख्या घर छ महल र ऐतिहासिक सहर. अन्तमा, त्यहाँ कोर्ट उद्यान र Residence वर्ग संग अर्जबर्ग Residence छ. यो जर्मनी मा सबै भन्दा ठूलो महलों मध्ये एक छ, Rococo शैली को एक महान उदाहरण.
यी बस युरोप मा धेरै सुन्दर यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु केही छन्. हाम्रो सुझावहरू, तपाईं गलत जान सक्छ तपाईंको यात्रा आयोजना. तपाईं विभिन्न प्रमुख देखि रेल द्वारा यी स्थानहरू पुग्न सक्दैन युरोपेली शहर.
युरोप प्रस्ताव छ के अन्वेषण गर्न तयार? उल्लेखनीय यूनेस्को विश्व सम्पदा साइटहरु आफ्नो यात्रा योजना र तपाईंको रेल टिकट बुक आज!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन र बस सक्नुहुन्छ यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन, वा यहाँ क्लिक:https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Funesco-world-heritage-sites-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
europetravel longtrainjourneys trainjourney Tranride ट्रेन यात्रा सल्लाह travelfrance travelgermany यात्रा युनेस्को
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा सल्लाह, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप